Nextcloud Hub 24 dia efa navoaka ary ireto ny vaovao | ubunlog
Nextcloud Hub 24 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Darkcrizt | 03/05/2022 17:30 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:07 | Software
Naseho tamin'ny lfanombohana ny dikan-teny vaovao amin'ny sehatra Nextcloud Hub 24, izay manome vahaolana mahaleo tena amin'ny fandaminana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiasan'ny orinasa sy ny ekipa izay mamolavola tetikasa isan-karazany.
Tamin'izany fotoana izany, navoaka ny sehatra rahona Nextcloud 24 Nextcloud Hub, izay ahafahanao manatanteraka fitahirizana rahona miaraka amin'ny fanohanana ny fampifanarahana sy fizarana angon-drakitra, manome fahafahana mijery sy manitsy ny angona avy amin'ny fitaovana rehetra na aiza na aiza ao amin'ny tambajotra (mampiasa interface tsara web na WebDAV).
Vaovao lehibe an'ny Nextcloud Hub 24
Amin'ity dikan-teny vaovao ity dia omena fitaovana fifindra-monina ahafahan'ny mpampiasa manondrana ny angonany rehetra amin'ny endrika rakitra tokana ary manafatra izany amin'ny mpizara hafa. Ny fanondranana dia ahitana ny firafitry ny mpampiasa sy ny mombamomba, ny angona fampiharana (Groupware, Files), kalandrie, fanehoan-kevitra, ankafizina, sns.
Mbola tsy nampidirina amin'ny fampiharana rehetra ny fanohanan'ny fifindra-monina, fa ny API manokana hanesorana ny angon-drakitra manokana dia natolotra ary havoaka tsikelikely. Ny fitaovana fifindra-monina dia ahafahan'ny mpampiasa tsy miankina amin'ny tranokala ary manamora ny famindrana ny mombamomba azy, ohatra, ny mpampiasa dia afaka mamindra haingana ny angona any amin'ny mpizara an-tranony amin'ny fotoana rehetra.
Ny fiovana iray hafa miavaka dia izany Ny fanovana dia nampiana tao amin'ny fizarana rakitra sy fitehirizana rakitra Nextcloud hanatsarana ny fampisehoana sy hampitombo ny scalability.
Ankoatra izay dia asongadina ihany koa izany nampiana Enterprise Search API hanondro votoaty voatahiry ao amin'ny Nextcloud amin'ny milina fikarohana an'ny antoko fahatelo. Ny fitantanana mifantina ny fahazoan-dàlana mizara dia omena, ohatra, ny mpampiasa dia azo omena zo manokana hanovana, hamafa ary hisintona data ao amin'ny lahatahiry iombonana.
Etsy ankilany, ny mampihena ny entana hatramin'ny in-4 amin'ny angon-drakitra rehefa manao asa mahazatra. Amin'ny fampisehoana ny votoatin'ny lahatahiry ao amin'ny interface, dia mihena 75% ny isan'ny fanontaniana amin'ny angon-drakitra. Nihena be ihany koa ny isan'ny fidirana amin'ny angon-drakitra rehefa miasa miaraka amin'ny mombamomba ny mpampiasa. Nohatsaraina ny fahombiazan'ny caching avatars, izay vokarina amin'ny habe roa ihany.
Ankehitriny koa ny mpitantana dia manana fahafahana mamaritra ny fotoana tsy mety hanao asa an-damosina, izay azo afindra amin'ny fotoana tsy misy hetsika kely, ary nanampy ny fahafahana mamindra ny famokarana thumbnail sy ny fanovana ny asa ho amin'ny microservice mitokana natomboka tao Docker.
ny fanatsarana mpampiasa interface tsara ho an'ny singa fiaraha-miasa (Nextcloud Groupware). Nampiana bokotra hanaiky / fandavana amin'ny kalandrie mpandrindra, ahafahanao manova ny satan'ny fifampiraharahanao amin'ny interface Internet.
Ao amin'ny mpanjifa mailaka dia nampiana ny asa fandefasana hafatra araka ny fandaharam-potoana sy ny fanafoanana ny taratasy vao nalefa.
Ao amin'ny rafitra fandefasana hafatra Nextcloud Talk, nisy asa natao mba hampitomboana ny fampisehoana ary nampiana ny fanohanana ny fanehoan-kevitra, ahafahanao maneho ny fihetsikao amin'ny hafatra amin'ny fampiasana Emoji.
Nampiana tabilao Media izay mampiseho sy mikaroka ny rakitra media rehetra alefa amin'ny chat.
Fampidirana desktop nohatsaraina: Manome fahafahana mandefa valiny avy amin'ny fampandrenesana mipoitra hafatra vaovao ary manamora ny fandraisana antso ho avy.
Ny dikan-teny finday dia manome fahafahana misafidy ny fitaovana famoahana feo. Rehefa mizara efijery dia nampiana fanohanana mba hampita amin'ny mpampiasa hafa tsy ny sary ihany, fa ny feon'ny rafitra ihany koa.
Ny suite birao mitambatra dia manolotra interface vaovao misy menu mifototra amin'ny tabilao.
Ny fitaovana fiaraha-miasa dia manome fanidiana fisie mandeha ho azy mandritra ny fanitsiana ao amin'ny fampiharana birao Text sy Collabora Online, raha tiana dia azo voahidy sy voahidy amin'ny tanana ny rakitra.
Ny tonian-dahatsoratra Nextcloud dia manohana karatra sy tabilao misy fampahalalana.
Nampiana ny fahafahana mampakatra sary mivantana amin'ny alalan'ny drag and drop interface.
Nanome famitana mandeha ho azy rehefa mampiditra Emoji.
Farany, raha liana ny hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao dia afaka mijery ny antsipiriany ao amin'ny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Nextcloud Hub 24 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Roa herinandro taorian'ny famoahana ny Ubuntu 22.04, Canonical dia mbola tsy nanavao ny tranokalany miaraka amin'ny logo vaovao.
Tonga ny Firefox 100 miaraka amin'ny scrollbar GTK vaovao sy fanatsarana PiP, ankoatry ny hafa